Miolankolana ny làlana mandeha mankany … – i am a malagasy in genève
i am a malagasy in genève
izay hitako ihany no asehoko anao
18 février 2007 15 mars 2010
Miolankolana ny làlana mandeha mankany …
… an-tendrombohitra ka tsy te-hiverina alina loatra any aho* satria Genève – Saint-Luc [Valais, CH], dia làlana 200 km maharitra 2:00 ora raha tsara ny andro.
– Genève [375 m] – Sierre [540 m], 179 km, làlam-be mahitsy mitan-djozotra « autoroute » maharitra 1:30 ora,
– Sierre  – Saint-Luc [1’655 m], 21 km, làlana an-tendrombohitra miolankolana maharitra 0:30 ora.
Vao miala ny « autoroute » dia manomboka avy hatrany ny fiakarana ka misy tapany roa tena henjana dia ny Sierre – Niouc ary ny Vissoie – Saint-Luc.
Ny tanànan’i Chippis ao Sierre io hitanareo amin’ny sary ambany làlana io, « dénivellation » 500 m hoan’ny fiakarana mirefy 7,5 km manelanelana azy amin’ny tanànan’i Niouc. Bibilava [serpent] miolankolana mitovy amin’io koa saingy vao mainka teritery kokoa ny tapany Vissoie – Saint-Luc.
« Val d’Anniviers » no iantsoana ny lohasaha, ary toy izao ny topi-mason’ny làlana mankany rehefa tafakatra eo Niouc. Izato manjavozavo ery anoloana izato ny tendrombohitr’i Cervin [tazanina avy aty avaratra].
[*vakio – Fa ianao angaha mpanohitra ny St-Valentin ? >>]
Posté dans tsidikaTagué foto, lacets, madagascar, madagasikara, malagasy, malgache, montagne, photo, photographie, photographies, photography, photos, route, routes, saint-luc, st-luc, val d'anniviers, Valaispar tomavana10 commentaires
10 réflexions sur “Miolankolana ny làlana mandeha mankany …”
19 février 2007 à 16:16
Mivoaka mazava be ilay sary anakiroa 😀
Tonga soa tsara ve ?
tomavana dit :
19 février 2007 à 22:48
Fakantsary kely no nakako ireo sary ireo ary ny ‘contre-jour’ no mampitombo ny loko manga. Mazava ho azy fa tsara kokoa ny mahita maso mivantana sy mifoka ny rivotra madio 😉
Tongasoa fa misaotra, efa niverina amin’izao 🙂
20 février 2007 à 03:13
Tena vita izany ilay lanezy any @nareo e ?
Ary efa mahay teknika be ka…
Fa tsy manana Flickr ve ianareo, mba mizara sary misimisy ?
hjk dit :
20 février 2007 à 06:10
tsara ery izao ny mikorisa midina amin’iny bibilava iny @ fiara sady mitazany ny tanàna ery alavitra e ! azoko sary an-tsaina ny hatsaran’ilay fakan-drivotrao teny an-tendrombihitra:) sambatra !!!
20 février 2007 à 08:57
@ Lillia tsara filatsaka ho ahy aloha ny oram-panala na dia tsy naharitra aza, tena Alahady hatramin’ny Talata fotsiny dia vita 😦
Aza omena tsiny fa tsy manana flickr … hi, hi, hi … tsy hita fa tsy maharaka ny teknolojia e. Fantatro koa fa misy ‘logiciel’ manao ‘panorama’ mihintsy aza. Misaotra amin’ny toro-hevitra fa mbola mila ho-eritreretina 😀
@ Harinjaka tsy azo anaovana ‘vitesse point-mort’ mba hitsitsiana essence mihintsy [chauffeur taxi-brousse any Mada] satria tena lalina ny hantsana. Soa ihany fa tena mifanaja ny olona rehefa mitondra fiara, indrindra rehefa aty an-tendrombohitra 🙂 Na dia izany aza rehefa milatsaka be loatra ny oram-panala dia voatery hidiana mihintsy indraindray ny lalàna mandra-pitsahatr’izany sy anadiovana ny lalàna.
Miezaka ny mizaka ny hatsiaka amin’ny lalao isan-karazany. Satria tsy afaka manararaotra ranomasina sy lanitra manga amin’ny andro ririnina toa anareo daholo e.
Rajiosy dit :
20 février 2007 à 22:47
hainao ve ilay andalan-kira hoe « ny làlana any Ihosy no miolakolaka, ny ampela ta-ho tunga ro mamolapolaka » ?
20 février 2007 à 23:19
Voalohany aloha faly mandray anao sy mirary tongasoa @ tsidikao.
Faharoa, tena vaovao amiko, tsy tsaroako hoe efa henoko indray ilay izy 😦 ny fohy henoko anefa toa mahafinaritra ahy ka mba sosay lakana ho tafita e 😀
Ping: Val d’Anniviers [Valais, CH] « malagasy
24 février 2007 à 22:48
e rila e agnay manina agnareo a
roso any fianarana
ny satrobory namidy lasiroa e
aza midiridiry fa samy maso roa e
ets ets (tsy tadidiko intsony)
dia izay voa avy ilay làlana any Ihosy
mbola papozy kely angamba i tomavana knoooou ! :-)))
24 février 2007 à 23:26
Hay ve 🙂 ny feony tsaroako fa ny tonony izany tsy dia arako loatra 😦
Raha resaka rija ity tokoa no tamin’ny toetr’andronay :
adaladala agny izao ny Jirama,
tokontanin’olo voleny poteau …
adaladala agny izao ny kilongalahy,
kilong’apela roa finainy amin’ny moto …
Misaotra amin’ilay lakana e 🙂
← Are You anti-Valentine ?
Val d’Anniviers [Valais, CH] →